फोटो फिचर | गृहपृष्ठ
साउन १, काठमाडौं (अस) । वर्षका १२ महीनाहरुमध्ये प्राकृतिक रुपमा रुपमा हरीयो महीना भनेर चिनिने महीना साउन महीना...
असार २४, काठमाडौं(अस) । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई एक अर्कासँग मेल नखा...
असार २१, काठमाडौं (अस)। नेपालमा गलैंचाको माग बढि छ । त्यसमा पनि गलैंचा निर्यात धेरै हुन्छ । खपत भने स्वदेशमा भ...
असार १५, काठमाडौं (अस) । आइतवार देशका अधिकांश धान रोप्ने खेतमा उत्सव मनाइयो । असार १५ लाई सरकारले राष्ट्रिय धा...
असार १४,काठमाडौं (अस) असार १५ अर्थात् धान दिवस अझ भन्ने हो भने दही चिउरा खाने दिन । ‘धान खेतीमा प्रविधि र यान्...
टीपी भुसाल असार १३, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रवार दिउँसो ‘बम थ्रेट’पछिको अवस्था परिक...
१. न्यूबिज बी स्कूल कन्क्लेभ एन्ड अवार्डको उद्घाटन गर्दै शिक्षासचिव खगराज बराल, साथमा न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष...
on: July 17, 2019 फोटो फिचर
साउन १, काठमाडौं (अस) । वर्षका १२ महीनाहरुमध्ये प्राकृतिक रुपमा रुपमा हरीयो महीना भनेर चिनिने महीना साउन महीना हो । साउन महीना वर्षा ऋतुको पहीलो महीना भएकाले खेतबारी, वनजंगल सबैतिर हरीयाली ह...	बिस्तृतमा
असार २४, काठमाडौं(अस) । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई एक अर्कासँग मेल नखाने राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य अनुरुप कार्य भइरहेको बताएको छ । सोही...	बिस्तृतमा
असार २१, काठमाडौं (अस)। नेपालमा गलैंचाको माग बढि छ । त्यसमा पनि गलैंचा निर्यात धेरै हुन्छ । खपत भने स्वदेशमा भन्दा विदेशमै बढि भएको देखिन्छ । पहिला पहिला गलैंचाबुन्ने काम नेपालको हिमाली क्षे...	बिस्तृतमा
असार १५, काठमाडौं (अस) । आइतवार देशका अधिकांश धान रोप्ने खेतमा उत्सव मनाइयो । असार १५ लाई सरकारले राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउन थालेसँगै खेतमै औपचारिक कार्यक्रमहरु पनि आयोजना हुन थालेका छ...	बिस्तृतमा
असार १४,काठमाडौं (अस) असार १५ अर्थात् धान दिवस अझ भन्ने हो भने दही चिउरा खाने दिन । ‘धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण’ भन्ने नारासहित १६ औं धान दिवसका अवसरमा मुलुकका व...	बिस्तृतमा
टीपी भुसाल असार १३, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रवार दिउँसो ‘बम थ्रेट’पछिको अवस्था परिकल्पना गरी पूर्णकालिन अभ्यास गरिएको छ । यो अभ्यास अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सं...	बिस्तृतमा
१. न्यूबिज बी स्कूल कन्क्लेभ एन्ड अवार्डको उद्घाटन गर्दै शिक्षासचिव खगराज बराल, साथमा न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्साल । तस्वीर: प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, रवि महर्जन, मोनिका मल्ल/आर्थिक...	बिस्तृतमा
on: June 18, 2019 फोटो फिचर
असार ३, काठमाडौं (अस) । काठमाडौंको न्यूरोड क्षेत्रमा सञ्चालित स्मार्ट पार्किङमा सेवाग्राहीलाई रसिद दिँदै कर्मचारीहरु । आइतवारदेखि शुरू भएको उक्त पार्किङमा गाडीको प्रतिघण्टा रू. ८० र मोटरसाइक...	बिस्तृतमा
on: June 15, 2019 फोटो फिचर
जेठ ३२, काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाअन्तर्गत बागमती कोरिडोरमा अवस्थित यो सरिया चिल्ड्रेन पार्क हो । हुन त काठमाडौं उपत्यका भित्र कैयौं शसुल्क पार्कहरु छन् तर यो एकमात्र निःशुल्क चिल्ड्रे...	बिस्तृतमा